पृथ्वीराजमार्गको कुरिनटारमा बस दुर्घटना ६ जनाको मृत्यु २२ घाइते
काठमाडौं । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस कुरिनटार नजिक चुम्लिङटारमा दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु छ। घटनामा २२ जना घाइते भएका छन्। मृतकहरुको सनाखत भइसकेको छैन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेमा ३ जना पुरुष, दुई महिला र एक बच्चा छन्। २२ जना घाइतेलाई उद्धार गरि अस्पताल
डा.केसीले अनसन तोडे, ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन के होला ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २७ दिनदेखि अनशनरत प्राडा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ९ बुँदे सममति भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहमति भएपछि डा. केसीको अनशन तोडेका छन् । डा. केसीको २७ दिन लामो अनसनपछि सरकार काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति नदिन
केसीको अनसन २७ औं दिनमा,समर्थकहरुको र्‍यालीमा प्रहरीको हस्तक्षेप
काठमाडौं । विहीबार प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनसनका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको र्‍यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट सुरु भई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म जान लागेको विद्यार्थी र चिकित्सकहरु
टिमुरे पहिरोमा परेर ४ जनाको मृत्यु, ५ वेपत्ता
रसुवा । रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका टिमुरेमा पहिरो जाँदा मृत्यु भएको ४ जनाको पहिचान खुलेको छ । मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका ५ का अन्दाजी ४२ वर्षका श्याम श्रेष्ठ, २७ वर्षका विक्रम श्रेष्ठ, ४५ वर्षका मंगल तामाङ र सोही गाउँपालिका– ४ का वर्ष ३७ का रेशम खड्का
नेविसंघका सभापति नैनसिंह र महामन्त्री कुन्दनबीच आरोप–प्रत्यारोप
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष नैनसिंह महरले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेपछि महामन्त्री काफ्लेले सभापतिले संठगनलाई चलायमान बनाउन नसकेको
विवादित अभिव्यक्तिले कानुन मन्त्रीको पद गुम्यो
काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो दुई बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । बंगलबादेशमा अध्ययनरत छात्राका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका मन्त्री तामाङका कारण सरकार र पार्टी
कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिने मनस्थितीमा
काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले दिउँसो दुई बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत राजीनामा घोषणा गर्ने निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन छ त्यसपछि राजनीमाबारे थाह हुन्छ,’ उनले भने,‘ हल्लाको भरमा
डा.केसीको अनसन राजनीतिक हतियार भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको आरोप
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनलाई केही दलले राजनीतिक हतियार बनाएकोले आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘आन्दोलन जायज भएपनि राजनीतिक पार्टीले यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजेका छन् ।’ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले
२० दिनपछि बलजफ्ती प्राडा.गोविन्द केसी काठमाडौं ल्याइए
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २० दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत प्राडा.गोविन्द केसीलाई सरकारले बलजफ्ती काठमार्डौ ल्याएको छ । डा.केसीको स्वथ्य अवस्था बिग्रदै गएकाले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत सुर्खेत हुँदै उनलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । डा. गोविन्द केसीलाई बोकेको सैनिक हेलिकोप्टर साँझ
श्रीमतीको नामको अर्कै केटी अमेरिका लैजान लागेको खुलासा
काठमाडौं । रौतहट जिल्ला गुजरा नगरपालिका –५ का स्थानीय रामकुमार गुप्ताले दोस्रो बिवाहको नाटक गरेर श्रीमती भन्दै अर्कै युवतीलाई अमेरिका लैजान लागेको रहस्य खुलेको छ । रामकुमारकी श्रीमती रुपरेखा गुप्ताले काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो श्रीमानले मधु साह नक्कली श्रीमती बनाएर अमेरिका लैजान
डा.गोविन्द केसीद्वारा सरकारी हेलिकप्टमा काठमाडौं जान अस्वीकार
जुम्ला । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २० दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत प्राडा.गोविन्द केसीले सरकारी हेलिकोप्टरमा काठमाडौं आउन अस्वीकार गरेका छन् । उपचारका नाममा सरकार अनशन तुहाउने रणनीति बनाएको भन्दै डा.केसीले काठमाडौं नजाने अडान राखेका छन्। सरकारले आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएकोमा डा. केसीले
विवादित मनमोहन मेडिकलका सञ्चालकले मुख खोले कमाउने धन्दाले खोल्न लागिएको होइन
काठमाडौं । विवादित मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले कलेज स्थापना गरेर लाखौं कमाउने ध्येय नराखेको बताएका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरू चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर वढाउन र सर्वसाधारणले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत रहेको भन्दै कमाउने उद्देश्य राखेर मात्र कलेज खोल्न नलागिएको स्पष्ट
गोविन्द केसीका माग जायज छन्ःझा
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले जुम्लामा अनशनरत प्राडा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका छन् । ‘सरकार केसीको सत्याग्रहका बारेमा गम्भिर नभएकाले समस्या झनै जटिल भएको छ,’उनले भने । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा झाले भने,‘उनले भनेकै आधार सबै हुनुपर्छ भन्न
सरकार डा.गोविन्द केसीको मागप्रति लचिलो बन्ने संकेत
काठमाडौं । जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले पहिलो चरणको वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । डाक्टर केसीको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्न गठित टोलीका सदस्य डाक्टर अभिषेकप्रताप सिंहले आज (सोमबार) बेलुकासम्म सरकारसँग पहिलो चरणको वार्ता हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने,‘हरेक मिनेट डा.केसीको स्वास्थ्य
कृषि प्रवर्द्धनका लागि एनआरएनएले नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नेपालको कृषिप्रवर्द्धनका लागि गैर आवासीय नेपाली संघको पहलमा नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । यस कार्यका निम्ति संघले कृषि प्रवद्र्धन समिति बनाएर कार्यक्रम अघि वढाएको छ । समितिका संयोजक युवराज गुरुङको नेतृत्वमा ‘समृद्धिको आधार कृषि,कृषि अभियानमा गैर आवासीय नेपाली’भन्ने मुल
काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ : मधेशी चिकित्सक संघ
काठमाण्डौ । मधेशी चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति सर्मथन जनाउँदै उनको जीवन रक्षाको अपिल गरेको छ । संघका प्रवक्ता डा. विनय पञ्जियारले माथेमा आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमाथि अहिले आएर प्रश्नचिन्ह खडा भैसकेको बताउँदै उक्त प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले अब
मलाई मिडियाले ‘माफिया’ बनायोः दुर्गा प्रसाइँ
काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँले नेपाली मिडियाले आफूलाई मेडिकल ‘माफिया’ भन्दै खेदेको आरोप लगाएका छन् । सम्बन्धनको पर्खाईमा रहेको बि एण्ड सी टिचिङ्ग अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रसाइँले सुदुर पूर्वमा मैले मेडिकल कलेज खोल्दा डा.गोविन्द केसी र उनका अनुयायीहररूले मलाई माफिया भन्ने
साना ट्रेड युनियनको माग श्रमिकको पारिश्रमिक २२ हजार
काठमाडौं । साना आधा दर्जन ट्रेड युनियन महासंघले सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेको अवस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम प्रारिश्रमिकबाट जीवन धान्न नसकिने भन्दै श्रमिकका न्यूनतम तलब २२ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने
होटलमा बसेर योजना चेक काटने गढिमाई नगरपालिका मेयर पक्राउ
रौतहट । होटलमा बसेर विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको भुक्तानीका कागजपत्रसहित गढिमाई नगरपालिकका मेयर र ५ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । गैर कानुनी ढंगले रकम वितरण गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरबाट खटिएका प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित होटल हिमालयनबाट
प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘बेमौसममा कराउनेहरू आफैं चुप लाग्छन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीप्रति झनै कठोर देखिएका छन् । उनले केसीको आन्दोलनप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसको उक्साहटमा भएको आरोप समेत लगाएका छन् । सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले
कालिगण्डकी कोरिडोरमा ट्रिपर दुर्घटना, १५ जना मजदुरको मृत्यु
पोखरा । मुस्ताङको स्याङ्बोचेमा सडक निर्माण गर्ने मजदुर चढेको ट्रिपर दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । दामोदरकुण्ड गाउँपालिका ३ स्याङ्बोचेमा कालीगण्डकी करिडोर सडकमा काम गर्ने मजदुर चढेको ट्रिपर सडकबाट खस्दा ४ महिला र ११ जना पुरुषको मृत्यु भएको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी हवल्लार कृष्णगोपाल परियारले
सशस्त्रका पाँच एआईजीको राजीनामा
काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) ले राजीनामा दिएका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि गरेका निर्णय खारेजीको निर्णय गरेलगत्तै सशस्त्रका पाँच एआईजीले राजीनामा दिएका हुन्। कांग्रेस
निषेधित क्षेत्र तोड्दै नेवि संघको प्रदर्शन
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) ले सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोडेको छ । काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा बुधबार दिउँसो २ बजे नेवि संघले निषेधित क्षेत्र तोड्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेवि संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप पौडेलको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरु
वर्षा केहीदिन वढ्छ,सचेत हुन मौसम विज्ञान विभागको अनुरोध
काठमाडौं । मौसम विज्ञान विभागले अझै केही दिनसम्म झरी वर्षा जारी रहने भएकाले सबैलाई सचेत हुन अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सोमबारदेखि जारी बर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानको खतरा रहेकोले सचेत हुन भनेको छ । मौमम पूर्वाअनुमान विभागले ७२ घण्टा भित्रको मौसम पूर्वाअनुमानमा
पुरानै चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने कांग्रेस सांसदको माग
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पुरानै चिकित्सा विधेयक अघि वढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिसभा वैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र पुष्पा भुसालले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक नै प्रस्तुत गरेर डा. गोविन्द केसीको अनशन तत्काल
दिल्लीमा एकै परिवारका ११ जना रहस्यमयी मृत्यु
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एकै घरमा ११ जनाको शव फेला परेको छ । दिल्लीको सन्तनगरस्थित बुरारी क्षेत्रमा रहेको सो घरमा ११ मध्ये १० जनाको आँखामा पट्टी बाँधेर झुण्डिएको र १ जनाको शव भने भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । मृतकहरु एकै परिवारका सदस्य रहेको
कांग्रेसले अड्कायो संसदीय सुनवाइ समितिःमन्त्री तामाङ
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका कारण संसदीय सुनवाइ समति गठन हुन नसकेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले कांग्रेसी नेतालाई अहिले भाग पाईएन भनेर छट्पटी भैरहेको भन्दै ‘कांग्रेसका केही साथीहरू
कार किन्दा ऋण दिने बैंकले भैंसी किन्दा किन ऋण दिदैनन् ?
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले बैंकले कार किन्दा ऋण दिने गरेको तर, भैंसी किन्दा किसानलाई ऋण नदिने परिपाटीको अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘बैंकले कार किन्दा लोन दिन्छन् तर भैंसी किन्दा दिँदैन्, यसले किसानलाई प्रोत्साहन गरेन, अहिले यसबारेमा
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अमर्यादित र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग गरि गाली गर्ने २ जनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंगलबार महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुबाट खटिएको टोलीले इलाम नगरपालिका–६, तिल्केनी ५० वर्षीय विनोद
नारायणगढ–मुग्लिन सडक फेरि अवरुद्ध
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको ४ किलोमा गएको पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ । बिहानै पहिरो खसेपछि आवागमन ठप्प भएको हो । ठूलो पहिरो खसेकाले दुवैतिरका गाडी रोकिएका छन् । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, चितवनले ठूलो पहिरो सडकमा आएर बसेकाले तत्काल सडक खुल्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन
कुल पोष्ट : 1138